Tag: dejinta wordpress | Martech Zone
Tag: dejinta wordpress
In kasta oo ay jiraan tiro dad ah oo ka mid ah wershadaha riixaya WordPress, haddana waxay ku noqon kartaa cabsi ganacsi yar oo aan lahayn tiknoolajiyad farsamo si ay u qaadato dhismaha tusaale ahaan WordPress. Kani waa faahfaahin weyn oo ku socda qof ama koox waxa ay u baahan yihiin si ay u fahmaan una dejiyaan markay qorsheynayaan iyo hirgalinayaan boggooda WordPress. Sidoo kale waan jeclahay sawirradan maxaa yeelay waxay u baahan tahay adeegsadaha inuu gujiyo-u maro microsite-ka is-dhexgalka ah si uu u arko
Bilo iyo bilo ka fiirsasho ah ka dib, ugu dambayntii waxaan sameeyay warqaddii oo waxaan ka iibsaday Blackberry Curve 8330 caawa dukaanka Verizon. Waxaan isticmaalayay shaashadda taabashada Samsung sanadkii la soo dhaafay waxaan seegay wicitaano aan tiro lahayn, iskumana qaban karo jadwalka taariikhda, mana istaagi karo inaan eego si aan uga jawaabo wicitaan. Anigu waxaan ahay taageere weyn oo Apple ah, laakiin waxaan ku mashquulsanaa iPod-keyga bishii ugu dambeysay si aan u arko haddii aan awoodo
Sumcadda ayaa ah Hooska Madoow ee Maamulka
Jimco, Febraayo 13, 2009 Sabtida, Janaayo 8, 2011 Douglas Karr
Warka waxaa ka buuxa qaar ka mid ah sheekooyinka cajiibka ah ee bini-aadamka dhowaan: Alex Rodriguez wuxuu qirtay steroids (si yaab leh ayaa looga reebay bogga wararka ee MLOD ee MLB.com) Michael Phelps wuxuu sawiray dheriga sigaarka cabba. Wuxuu markii dambe lumiyay heshiis weyn oo uu ku aqbalay Kellogg's. Xitaa Barack Obama wuxuu soo maray dhowr toddobaad oo adag, isagoo isku dayaya inuu helo xubno ka tirsan golaha wasiirrada isla markaana ku riixo xirmo dhiirrigelin ah oo hoos u dhacday sumcadda. Waxaa jira waxyaabo la wadaago. Mid kasta oo ka mid ah dadkaasi wuxuu ahaa kuwa ugu sarreeya adduunka.